Yenza imali nge-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Fumana imali nge-Instagram
Disemba 12, 2018 0 IiCententarios 858
Ukuba unenani elikhulu labalandeli kwi-Instagram. Ukuba nawe unegama elihle kwi-Intanethi ngenxa yemipapasho ekwabelwana ngayo kunye nempumelelo abayifumeneyo, kuya kufuneka uye phambili. Kwaye kukuba nge-Instagram unokufumana imali, unokufumana isibonelelo soqoqosho kule nethiwekhi yoluntu. Emva koko siyakuxelela indlela yokwenza imali nge-Instagram.
Iinkampani zifuna ukufikelela kubaphulaphuli abathile kwaye ziyiphembelele. Yile nto kanye eyenziwa ngabafakisi kwaye eyenza ixabiseke kakhulu kumaziko. Ngenxa yeso sizathu Los abachaphazelayo unokwenza imali kwiprofayile yakho ye-Instagram ngeendlela ezahlukeneyo
Into yokuqala yokwazi ukuba abalandeli abaninzi unabo, amathuba amaninzi fumana imali kuza kubakhona i. Ungathenga abalandeli kwi-Instagram ngokukhuselekileyo. Oku kunokwenziwa ngenani elikhulu leewebhusayithi ezikhoyo kwi-Intanethi. I-GuyoGram kunye neTurbo Njenge-Instagram zizicelo ezimbini ezinokuthenjwa ezinokufunyanwa kuthengwe abalandeli ngesiqinisekiso sokuba bahambisa oko bakuthembisayo.
Kodwa ukufumana isibonelelo sezoqoqosho nge-Instagram kuya kuxhomekeka kwizinto ezininzi: i-niche apho i-akhawunti ikhoyo kunye nokulula kokudibanisa kwisihloko, inqanaba lokuzibophelela kwabalandeli bayo kunye neendlela zengeniso ezifunwayo.
Nje ukuba ubone oku ngasentla, Indlela elungileyo yokwenza imali nge-Instagram kukuthengisa imifanekiso. Olu lukhetho olufanelekileyo kwabo bazinikezele ekufoteni kwaye abalunge kakhulu ekufezekiseni iifoto ezifanelekileyo. Ezinye izicelo okanye iiwebhusayithi ezithenga kwaye zithengise imifanekiso zezi: pixels.com, Instaprints okanye Instacanvas.
Abaphembeleli bafuna kakhulu iimveliso. Ngabo bafuna ukufikelela ukubonakala okukhulu kwiimveliso zakho, kodwa kwakhona nokuzithemba kunye nobungakanani bempembelelo kubaphulaphuli bayo abo baphembelelayo. Ngesi sizathu, ezinye nkampani Basebenzisana nabo ukwenza iimpapasho ezixhaswayo. Le yenye indlela elungileyo yokufumana imali ngayo Instagram.
Enye indlela yokwenza imali ngeprofayile ye-Instagram ukuthengisa iimveliso zendalo nokwazisa ngayo ngale nto intanethi. Zingaba ziinkonzo okanye izinto ezibonakalayo. Ukuba silungile kwezobugcisa, kubugcisa bokuzoba okanye kwifashoni, kunokuba yinto efanelekileyo yokwenza imali nge-Instagram.
Ukongeza, namhlanje kuyimfashini kakhulu ukwenza ihempe zethu ngemiyalezo etsala umdla. Ngapha koko, ukuba singabafota sinokuprinta imifanekiso yethu kwiikipa kwaye sizithengisele abalandeli bethu. Ke, baya kuba nento eyahlukileyo neyoqobo.
Abaphembeleli kunye nabakhangisi
Ngakolunye uhlangothi, Kukho izicelo ezininzi ezinamandla okuphembelela (abantu abanabalandeli abangaphezu kwe-1.000 kwi-Instagram) kwaye abakhangisi banokunxibelelana. Kwaye ke, ziyenye indlela yokwenza imali kwiprofayile yethu ye-Instagram.
Phakathi kwala maqonga kukho ezinye ezifana neSocialpubli, ephawula ixabiso eliqinisekiswe ziinkxaso ezixhaswe ziiakhawunti zabaxhasi ngokuhambelana kwazo kunye notoriety, okanye uTakumi, onefuthe ledatha kwaye enze umkhankaso wentengiso kubakhangisi. Ukwenza imali njenge-influencer abasebenzisi abaninzi banquma Thenga abalandeli kwi-Instagram ukwenzela ukwandisa ukuthandwa kwayo.
1 Yandisa abalandeli
1.2 Upapasho oluXhasiweyo
1.3 Ivenkile yeyakho
2 Abaphembeleli kunye nabakhangisi
Thenga abalandeli kunye nezinto ezikuthandayo kwi-Instagram